Ulapha : Ikhaya>Product>Iphaneli eyenziwe ngemvilophu esele yenziwe
Inombolo Model: Iphaneli eyenziwe ngemvilophu esele yenziwe
Ngokuthuthuka kobuchwepheshe besimanje bezimboni, izindlu zokwakha zingenziwa ngamabhendi nakumasethi afana nomshini womshini. Inqobo nje uma izinto zokwakha zimisiwe zithuthelwa endaweni yokwakha bese zihlanganiswa.
Izakhiwo ezakhiwe kwangaphambili zaqala ukuvusa isithakazelo sabantu ekuqaleni kwekhulu lama-20 futhi ekugcineni zenzeka ngawo-1960s. IBrithani, iFrance, iSoviet Union kanye namanye amazwe benze umzamo wokuqala. Ngenxa yesivinini esisheshayo sokwakha kanye nezindleko zokukhiqiza eziphansi zezakhiwo ezenziwe ngaphambilini, zaziwa ngokushesha emhlabeni wonke.
Ukuvela kwezakhiwo zokuqala ezenziwe ngendwangu kwakunzima ukugqokwa nokufana ngomfaniswano. Kamuva, abantu bathuthukisa ekwakhiweni, ekwandiseni ukuguquguquka nokwehlukahluka, ukuze izakhiwo ezingaphanjwanga zingakhiwa hhayi nje kuphela kodwa, nezitayela ezicebile.
I. Imisebenzi kanye nezinzuzo ze-GRC Ezihlanganisiwe Zezokuvikela Izakhiwo Zangaphandle
Imikhiqizo yangaphakathi ye-GRC ingashintshaniswa ekubumbeni, ekwakhekeni, umbala, ukuthungwa, njll.
1. Isakhiwo sokuvikelwa kwangaphandle sihlanganisa: udonga lwangaphandle, uphahla, iwindi eliseceleni, umnyango wangaphandle, njll.
2. Isakhiwo esisetshenziselwa ukuphefumula sisetshenziselwa ukuhlanganiswa komhlobiso wangaphandle we-facade kanye nokugcinwa kokushisa ukumelana nomoya nemvula, izinguquko zokushisa, imisebe yelanga, njll.
3. Umsebenzi: Inezici zokulondolozwa kokushisa, ukufakwa kokushisa, ukungena kwamanzi, ubufakazi bomswakama, ukumelana nomlilo, ukuqina, ukuzihlanza, njll.
4. Ingahlukaniswa ngesakhiwo sokuvalelwa kwe-single-bay kanye nesakhiwo sokuvalelwa esihlanganisiwe se-multi-bay.
5. Ingahlukaniswa ngohlelo olulodwa lwesendlalelo sohlelo nolwakhiwo lwe-mult-layer composite. Ungqimba lwangaphandle ungqimba oluvikelayo, oluphakathi lusebenzisa izinto zokugcina ukushisa zokufafaza, kanti ungqimba olungaphakathi luyingqimba engaphezulu yangaphakathi.
6. Isendlalelo ngasinye sisebenzisa i-skeleton njengesakhiwo esisekelayo noma isendlalelo sokuqinisa sangaphakathi esivikelekile njengesakhiwo esisekelayo;
Imisebenzi eyinhloko nezinzuzo zezakhiwo ezenziwe nge-GRC yilezi:
(1) Idizayini eyahlukahlukene.
Njengamanje, ukwakheka kwendawo yokuhlala akuhambisani nesidingo sezindlu, izindonga eziningi ezithwele umthwalo, isikhala esincane, ukwahlukanisa okufile, kanye nendawo esegumbini ngeke yehlukaniswe kalula. Kodwa-ke, izindlu ezisetshenzisiwe zingahlukaniswa ngamakamelo amancane emahholo noma amakamelo amakhulu emahholo amancane ngokuya ngezidingo zabahlali. Enye yezinkinga eziyinhloko zamakamelo amakhulu aguqukayo kwizakhiwo zokuhlala ukuba nezindonga ezihlukanisayo ezikhanyayo. I-GRC, i-GRG, i-GRP nezinye izinto ezintsha ziyizisetshenziswa ezinhle kakhulu zangaphandle zodonga lwangaphandle, izindonga zokuhlukanisa, ophahla olulengisiwe kanye nomhlobiso odongeni lwangaphakathi.
(2) Ukusebenza kabusha kwesimanje
Izakhiwo ezenziwe nge-PC-GRC zinemisebenzi elandelayo:
1. Ukuvikelwa kwemvelo futhi akukho ukungcoliswa. Udonga lunemisebenzi yokuzihlanza nokuzihlanza emoyeni.
2. Udonga olungaphandle olonga amandla luba nesendlalelo sokufudumeza esishisayo sokukhulisa ukufudumeza ebusika futhi sinciphise ukusetshenziswa kwamandla kokwenza komoya ehlobo;
3. Ukufakwa komsindo kuthuthukisa umsebenzi wokubopha izindonga nezicabha namafasitela. Izinto zokufakelwa ezishisayo zinomsebenzi wokumunca ozwakalayo, ukuze zinikeze indawo ethule egumbini futhi zigweme ukuphazamiseka komsindo wangaphandle.
4. Ukuvimbela umlilo nokubuyiselwa komlilo ukuvimbela ukusakazeka noma ukusabalala komlilo;
5. Ukuncishiswa kwe-Aseismic kwesisindo sokwakha kanye nokwanda kokuxhunyaniswa okuguquguqukayo okwenziwe ngamatshe;
6. Ukubukeka okuhle akudingi ukunethezeka, kepha i-facade icacile futhi ihlukile, futhi ngeke iklaze, ichitheke noma iphele amandla ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside.
7. Ukuchayeka okuhle kuhlinzeka ngezimo ezinhle zekhishi nendlu yangasese ukuze ifakwe izindawo zokuhlanzeka ezahlukahlukene;
8. Ukunwetshwa okuhle ukukhulisa amathuba okudala imishini entsha kagesi, imishini yokuxhumana, imishini yokonga amandla, njll.
(3) Ifektri yokukhiqiza
Kunzima kakhulu ukuthi ingaphandle elingaphandle lezakhiwo zendabuko likhiqize amaphethini amahle ahlukahlukene ngokuya ngokwakhiwa kwesiza, kanti upende wombala opendiwe ngeke ukhombise umehluko wombala futhi ngeke uphele isikhathi eside. Kodwa-ke, amaphaneli okwakha odonga lwangaphandle we-GRC angakwenza kalula lokhu ngokusebenzisa isikhunta, ukufafaza ngomshini, ubuchwepheshe be-nanotechnology, ubuchwepheshe bokubhaka microwave nobunye ubuchwepheshe. Izinto zokufakelwa ngobuningi zithathelwa indawo ngokuphelele ngezinto zokwenziwa ezihlanganisiwe ze-PC-GRC; Ama-Roof trusses, ama-joints wensimbi akhanyayo, ama-hacks wensimbi ahlukahlukene kanye nezixhumi konke kungumkhiqizo owenziwe ngomshini onobukhulu obuqondile. Amaphaneli aphansi nophahla nawo ahlanganiswa emafektri ukuze kube lula ukwakhiwa. Izinto zasendlini ezinjenge-gypsum board, izinto zokumboza phansi, amabhodi okulengiswa ophahleni nokunye okunjalo kungenziwa kuphela ngemigqa yokukhiqiza eyinkimbinkimbi. Ngaphandle kwalokho, kwinqubo yokukhiqiza yale fektri, izinkomba zokusebenza kwezinto ezifana namandla, ukumelana nomlilo, ukumelana nesithwathwa, ukumelana nomswakama, ukufakwa komsindo nokugcinwa kokushisa kungalawulwa nganoma yisiphi isikhathi.
Indlu ithathwa njengemishini enkulu, kanti izinto zesimanje zokwakha i-PC-GRC ziyizinto zalo msebenzi. Izinga lalezi zingxenye lingaqinisekiswa ngokukhiqizwa okuqinile kwezimboni, futhi indlu ebuthene ingahlangabezana nezidingo zokusebenza.
(4) umhlangano wokwakha
Njengoba ukuzithemba kwezakhiwo ezihlangene ze-PC-GRC kuncishiswa ngesigamu uma kuqhathaniswa nokwakhiwa kwezakhiwo zendabuko, isisekelo senziwe lula. Ngemuva kwekutsi tincenye tetakhi tekwakhiwa tisetjelwe efekthri, tisebenti letisetindzaweni tetihlangana tabo ngekulandzelana kwemidwebo. Imisebenzi enkulu enamanzi enjengodaka, ukubeka udaka nokwakhiwa kodonga ngeke isabonakala esizeni. Ukwakhiwa komhlangano we-PC-GRC kunezinzuzo ezilandelayo:
1. Intuthuko esheshayo, ingalethwa ngesikhathi esifushane;
2. Amandla abasebenzi ancishisiwe, futhi imisebenzi yesiphambano ilungele futhi ihlelekile;
3. Inqubo ngayinye yokusebenza ingabheka ukunemba okufana nokufakwa kwemishini ukuqinisekisa ikhwalithi;
4. Indawo yokwakha inomsindo ophansi, izinto eziningi ezinobuningi nokungcola okuncane nokuchitheka kwamanzi, okuwusizo ekuvikelweni kwemvelo;
5. Izindleko zokwakha ziyancishiswa.